‘बूढीगण्डकी आयोजना : कुन मोडालिटीमा... :: सुजिता कार्की :: Setopati
‘बूढीगण्डकी आयोजना : कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने? भन्ने निर्क्यौलपछि काम अघि बढ्छ’ (भिडियोसहित)
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। आयोजना सरोकार समितिका पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले आयोजना प्रभावितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने आश्वासन पनि दिए।
मन्त्री पुनले आयोजना कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने? भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने र जग्गाको मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान हुनेमा शंका नगर्न पनि सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।
उनले बूढीगण्डकी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सरकारले समयसीमा नै निर्धारण गरेर अघि बढाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
सरोकार समितिका पदाधिकारीहरूले भने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्री पुनसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले जग्गाको मुआब्जा वितरण र प्रभावितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए। आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका ३ वटा सरोकार समितिले शुक्रबार उर्जामन्त्री पुनलाई भेटेर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेको हो।
आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनु परेको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १६, २०७४, ०६:२३:३०